CANAB "ISABELLA": FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELOOYINKA NOOCYADA CAANKA AH - CANAB
Waa maxay noocyada kala duwan ee canabka ee "Isabella"
Qaar badan oo naga mid ah, qaabka caadiga ah waa joogitaanka Isabella Grapevine oo ku taal xaafada. Waxaad u maleyneysaa in wanaagga keli ah ee berrigan ay yihiin wax aan qabyo ahayn iyo iska caabin ah dhaxan, taas oo muhiim u ah dalalkeena. Si kastaba ha ahaatee, tani way ka fog tahay kiiska. Canab "Isabella", marka lagu daro tayadaas, waxay leedahay waxyaabo kale oo faa'iido leh oo kale.
Sharax kooban oo ku saabsan noocyada kala duwan
Noocyada kala duwan ee canabeelka Isabella waa Maraykanka, halkaasoo qarnigii 19aad, adoo ka tallaabay canab dhanaan ah oo caano ah oo laga sameeyay cirifka Maraykanka, dareenka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa u muuqday.
Ma taqaanaa? Magaca noocyada kala duwan ee canabka ee "Isabella" ayaa lagu sharfay dhoobada dhulka, halkaas oo noocyada kala duwan ee loo caleemo saaray - Isabella Gibbs.
Waxyaabaha kala duwan, midho goosashada goor dambe, laga bilaabo dabayaaqadii Sebtembar ilaa Nofembar. Berry si wanaagsan ayuu u koraa, wuxuuna dhirtaa miro leh Moldova, Belarus, Ukraine, qaybta dhexe ee Ruushka, Siberia iyo Volga, oo ku yaal gobollada qoyan ee Caucasus. Kala duwanaan ku filan bacrin ah iyo baraf u adkaysta (illaa -30 ° C). Kooxuhu waxay leeyihiin qaab muuqaal ah. Waxay noqon karaan dhexdhexaad dhexdhexaad ah (miisaankoodu yahay 0.25 kg) ama aad u ballaaran (in ka badan 2.3 kg).
Berry wuxuu yahay mid macaan, midab dhexdhexaad ah, buluug madow, ku dhowaad madow. Miisaanka Berry - ilaa 3 g, dhexroorku wuxuu gaari karaa 18 mm. Maqaarka cufan ayaa si sahlan loo kala saari karaa ilmaha caloosha. Suntu waxay leedahay ur taajir ah oo leh talosiin strawberry iyo raspberry.
Waxyaabaha sonkorta leh - 15.4 Brixiyo, acidity - 8
Berry wuxuu leeyahay content sare oo bir ah, iodine, vitamiin A iyo B.
Baro wax badan oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan iyo astaamaha isticmaalka canab.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay canab "Isabella" content content amino acidsku lug leh geedi socodka endocrine iyo lagama maarmaanka u ah soo saarista borotiinnada ee jirkeena:
arginine ayaa ku lug leh soo saarista HOL;
lizin waxay lagama maarmaan u tahay koritaanka jidhka;
Ventin wuxuu ku lug leeyahay neuroregulation;
leucine ayaa mas'uul ka ah sun-naqshada borotiinka;
phenylalanine - kobcinta hormoonnada iyo geedi socodka dhiigga;
methionine - kobcinta jidhka, kobcinta carotene, nuugista baruurta iyo xakamaynta baruurta, ilaalinta beerka;
Isoleucine waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo astaamaha caadiga ah ee astaamaha amino.
Waxyaabaha Micro iyo macro
Of the macruufiyeyaasha ee berry inta badan dhan oo potassium, oo ku saabsan 250 mg. Kadibna, sida ugu hooseysa: kalsiyum, sodium, fosfooraska, magnesium.
Sidoo kale waxaad ku jirtaa halbeegyada (walxaha walax kasta oo ka yar 10 mg): Sulfur, chlorine, birta, aluminium, zinc, molybdenum, copper.
Waa muhiim! Waxsoosaarka canabka "Isabella" wuxuu gaarayaa 7 tan halkii hektar ee waxtar leh.
Vitamiin ku jira berri ee tiro ahaan:
A - 0.15 mg;
B1 - 45 μg;
PP - 0.27 mg;
B5 - 95 μg;
B6 - 620 mg;
B9 - 3.0 μg;
C, 5.5 mg;
E - 0.35 mg;
Biotin - 3 μg;
K - 0.6-2.2 mcg.
100 g oo canab oo ka kooban:
biyaha - 80.5 g;
borotiinka - 0.6 g;
baruurta - 0.6 g;
carbohydrates - 15.5 g;
pectins - 0.5 g;
Asaasiga noolaha - 0.85 g;
haraaga ash - 0.5 g
Kalorie content - qiyaastii 80 kcal halkii 100 g
Ma taqaanaa? Waxaa jira fikrad ah in halsano ay ahayd markii hore oo kaliya habka lagu ilaaliyo cabitaanka, iyo walxaha walxaha ethanol wuxuu ahaa mid muhiim u ah alaabada.
Waa maxay isticmaalka noocyada
Marka laga soo tago berry, dalagga ugu muhiimsan ee geedka canabka ah, waxyaabaha kale ee dhaqanka qiimo leh ayaa la isticmaalay. Tusaale ahaan, caleemaha waxaa loo isticmaalaa inay sameeyaan suxuunta caanka ah ee Caucasian - buuxa, inkastoo tani aysan ahayn isticmaalkooda keliya.
Isabella waa noocyo madow. Midabkeedu wuxuu muujinayaa in content sare ee anthocyanins - walxaha jirka ka ilaaliya bakteeriyada iyo xagjirnimo lacag la'aan ah. Berry leeyihiin tallaabo wanaagsan oo ku saabsan dabeecaddaas:
kordhinta dabacsanaanta derbiyada xididdada dhiigga;
saameynta faa'iido leh ee heerarka hemoglobin;
caadi ahaan cadaadiska dhiigga;
ka soocida alaabada wax burburisa jirka;
caadi u shaqeysid wadnaha wadnaha.
Waxyaabaha ugu sareeya ee antioxidants - ee abuurka iyo diirka. Flavonoids waxay gacan ka geysataa joojinta naadiyada iyo cusbada biraha sunta ah. Juice waa qalab aad u fiican oo lagu daaweyn karo - waxaa lagu talinayaa dadka ay soo mareen jimicsiga jidhka oo aad u daran intii lagu jiray hawlaha dib-u-shaqeynta iyo dib-u-dhiska ka dib, iyo sidoo kale dadka qaba dhibaatooyinka maskaxda (niyad-jabka).
Waa muhiim! Yurub iyo America, kala duwanaanta Isabella waa mamnuuc beerashada ganacsiga iyo samaynta khamriga. Sababta rasmiga ah waa maaddooyinka sare ee methanol ee khamriga. Mar danbe bayaankaas lama xaqiijin cilmi baaris. Waxaa jira fikrad ah in kuwa soo saaraha ah ee noocyo badan oo sabiib ah iyo khamriga ay ka soo jeedaan ay kufilanayaan danahooda iyaga oo leh walxo wargalin ah.
Leaves iyo stems
Ma aha oo kaliya berry, laakiin sidoo kale caleemo dhirta leeyihiin guryaha faa'iido leh:
caleemaha cusub ee la gooyey ee ku yaal qaybo kala duwan oo jirka ah ayaa yarayn kara heerkulka;
faleebo caleemo la qaato marka qufacayo, waxay leedahay ficil ficil ah iyo ficil xanuun;
Iyadoo dib-u-caleemaha cagaarshow, xanuunka loo yaqaan "tonsillitis" iyo "faryngitis" ayaa la daweynayaa, caleen cusub ayaa ka caawisa nabarrada.
In daawada dad, khudaar ayaa loo isticmaalaa - casiir geedka canabka ah. Ururi juice Bishii April - waqtigaan dabiiciga ah, iyo sida, wax soo saarka laga helay canabkiinna canabka ah, wuxuu leeyahay hantida si uu u siiyo awood noloshiisa. Fikradda sare ee fiitamiinada iyo asiidhyada kiimikada ah waxay soo heleen codsigooda daaweynta gout, neefsashada, suuxdinta, waxay sidoo kale hagaajinaysaa habka dheef-shiidka.
Iska hubi qodheer si aad u samayso champagne guri ka soo caleemo canab.
Waxyeellada suurtagalka ah
Culeyska miisaanka. "Isabella" waa mid hodan ku ah sonkorta, markaa haddii aad lumiso miisaanka, waa inaadan cunin wax ka badan 50 garaam oo beruud ah maalintii. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa waxyaalaha sonkorta ee alaabta kale.
Dhiirrigelin. Iyada oo ay ku xiran tahay macdanta sare ee potassium ee berry, haraadka ayaa dhici kara. Qadar badan oo biyo ah oo la wada isticmaalo ayaa dhiirrigeliya cadaadiska.
Kordhay acidity of casiir gastric ah.
Dareen-celinta xasaasiyadda jirka.
Waa muhiim! Carbolic acid, oo ah macnaheedu yahay ka hortagga kansarka, ayaa ku jira maqaarka canab guduudan.
Sida loo sameeyo khamri laga soo qaado canab: qadar talaabo qaadasho leh sawirro
Khamrigu waa isticmaalka ugu caansan iyo qadiimiga ah ee berriga. Qalabka sheyga ayaa weli laga helayaa amphorae qadiimiga ah ee ugu hooseysa badda Mediterranean. Aan isku dayno oo aan ka dhigno khamri qurux badan, dabiici ah iyo caafimaad leh.
Si aad u samayso khamri waxaan u baahanahay:
dhalada quraaradaha (25 l);
dabool adag ku xir bacda biyaha;
siphon (tuubo leh tuubo);
xakameynta xannaaneynta guriga;
baakadaha dhalada ee khamriga la dhammeeyey.
Tallaabo ku saabsan qandhada tallaabada
Isku uri canab waa in ay ahaato cimilada qalalan, si khamiir dabiiciga ah u ah dusha sare.
Goosashada waa in laga soocaa laamaha, oo ka tago nooca berry ah.
Waxaad khamri ka samayn kartaa noocyo isku mid ah, waxaadna tijaabin kartaa Isabella, tusaale ahaan, Lydia.
Waxaan bacriga ku dhufannaa gacmaheena, u soo dir baaxada ay keentay (saxarka) si aad uhesho digsi dhalaalaya.
Isticmaalka cabir-celiye-celinta guriga, waxaan eegnaa heerka sonkorta ee casiirka (tirada caadiga ah ee Isabella waa 20-22%).
Daboolka ku dabool daboolka faashadda iyo daboolka, ku rid meel gudcur ah si aad u bilowdo hargabka hargabka, walaaq qashinka maalin walba.
Ka dib 6 maalmood, adoo isticmaalaya suugaan iyo faashad, waxaan ka sooceynaa saxarka ka soo juuska oo bilaabay inuu halsano.
Ku shub sharaabka la sifeeyay ee dhalada loo diyaariyay dhalada (si fiican isaga dhaq biyo qabow iyo jeermis).
Mar labaad, qaado imtixaanka sonkorta. Waxaa jira jadwallo gaar ah oo u dhigma heerka sonkorta illaa khamriga alaabta la dhamaystiray (tusaale ahaan, 17% sonkorta casiirku wuxuu dhalin doonaa 10% aalkolo).
Cawsashada tuubadu maaha mid u qalantaa, waxaad ka dhigi kartaa chacha iyaga.
Waxaan ku dhajinay dhalada casiir ka yar shaashadda biyaha, ka tag meel gudcur ah heerkulka qolka.
10 maalmood ka dib (waqtigaan khamrigu wuxuu joojin doonaa inuu si firfircoon u ciyaaro), casiirka waa in la caddeeyaa, markii ugu horeysay ee duufsanayo. Iyada oo lagu caawinayo siphon (tuubo leh tuubo, lagu xisaabiyo dhererka si markaa hoos loogu dhufto dhalada, ma gaarin faleemada) si taxadar leh, si aanay u dhicin tuubada, ku shub khamriga.
Haddii la rabo, waxaan ku dari karnaa sonkorta (qiyaasta 50-60 g halkii litir). Xaaladdan oo kale, casiirku waa inuu yaraa kululaa, si loo sii daayo.
Waxaan ku shubaa casiir cad oo dib loogu soo celiyay dhalo nadiif ah oo ku rid bacda biyaha (heerkulka hawada lagu taliyay waa 19-21 ° C), tani waa muddo halsano ah halsano.
Kadib bil keliya oo halsano ah, waxaa lagama maarmaan ah in khamriga laga daadsho taakulada labaad. Waxaan u sameeynaa si isku mid ah markii ugu horeysay.
Qiyaastii 10 maalmood kadib, markii saddexaad, ku shub khamriga ka soo daadi.
Hadda waxaan khamriga u nadiifin doonaa bentonite. Waxaan qaadnaa bentonite (3 qaado oo halkii 20 litir), ku qoyso qadar yar oo biyo ah ilaa inta ay joogtada tahay labeen dhanaan. Buuxi khamriga iyo bentonite dhalada oo si fiican u qaso 3-4 goor maalintii, isaga oo ka tagaya si buuxda u caddayn.
Qiyaastii hal usbuuc ka dib, iyadoo la adeegsanaayo siphon, waxaan ku shubaa khamriga nadiifinta daasadaha iyo dhalooyinka la nadiifiyey, ku rid qabow (maqaasi).
Sidoo kale akhri ku saabsan karinta khamriga laga bilaabo xayawaanka, currants madow, raspberries, tufaax, tufaax, compote.
Sidee loo sameeyaa "Isabella" oo ah qasacad
Haddii aad u maleyneyso in khamrigu uu yahay nidaam hawleed ah oo aadan sameyn karin ama sababo kale oo aadan rabin inaad sameyso, isku day inaad sameyso cabitaan kale - qasacad aad u fiican oo canab ah iyo tufaax.
Qalabaynta guriga, waxaan u baahanahay:
canab (berry) - 0.5 kg;
Tufaax - 2 pcs;
sonkorta - 300-350 g;
Berry oo la dhaqay iyo jarjaran oo ka jaray tufaax laga soo qaaday asalka ayaa lagu shubay dhalada la diyaariyey (waxaad ku dari kartaa, tusaale ahaan, strawberry yar), ku dar sonkorta meel isku mid ah.
Ku buuxi dhalada miraha si aad ugu daadiso biyaha.
Waxaan ku dhejin karnaa dherer badan oo biyo ah karkaraya si nadiifinta ah, ka dib karkaraya waxaan nadiifineynaa 30 daqiiqadood.
Waxaan soo saarnaa dhalada, ku dar qanjaruufo dhexdhexaad ah, ku dar biyo karkaraya ilaa sare iyo ku duub daboolka.
Si fiican u xir xididka leh buste oo ka tago maalin, illaa iyo inta uu si buuxda u qaboojiyo.
Sidoo kale fiiri cuntooyinka loogu talagalay sameynta compote ka soo jiilka, khudradda, malab, tufaax, isterobuur, dogwoods, currants, strawberries, blueberries, qaboojiye, iyo qaraha.
In badan oo ku saabsan faa'iidooyinka canab
Erayo yar oo ku saabsan faa'iidooyinka casiirka iyo waxyaabaha kale ee ka soo baxa berry qoraxda.
Faa'iidooyinka casiir sabiib ah
Sonkorta ku jirta casiirku waa qaab si fudud u nuugo jirka - fructose iyo glucose. Carbohydrateskani waxay si toos ah ugu lug leeyihiin is-weydaarsiga tamarta. Macdanta iyo fitamiinada ay ku badan yihiin casiirka waxay ku tartami karaan fitamiinada wax soo saarka warshadaha. Biyaha waxay ka dhigan tahay 80% mugga cabitaanka, sidaa daraadeed waa qalab aad u fiican oo lagu ilaalinayo dheelitirka biyaha.
Baro wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka casiirka sabiibta iyo abuurka.
Sidee bay miraha canabku ufaqmaan?
Canabka lafaha ee uu ka kooban yahay hodan ka badan hilibka. Waxay leedahay wax kasta oo ku jira saxarka, laakiin tiro badan. Gaar ahaan badan oo fitamiinnada E iyo B, borotiinno. Saliidda ku jirta lafta waxay kor u qaadeysaa nabarrada dib-u-dhiska waxayna hagaajinaysaa aragga. Phytohormone ayaa si gaar ah faa'iido u leh jirka haweenka. Waxay leedahay saameyn togan oo ku saabsan shaqada muruqa wadnaha, oo lagu caddeeyey inuu wax ku ool yahay cudurka Parkinson iyo Alzheimers.
Ma taqaanaa? Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu sheegayaa in cabitaanka miraha, dabka, dharka, birta, biyaha, caanaha, iyo burka, ay ka mid tahay baahida aasaasiga ah ee nolosha aadanaha (Sirax 39:32).
Qodobo waxtar leh oo khal
Wax ku ool ah xanuunada habka dheef-shiidka, si loo wanaajiyo geeddi-socodka endocrine ee jidhka, waxay caadi u tahay acidity of caloosha.
Waxay buuxisaa khalkhalka potassium, waxay kordhisaa stamina, waxay yareysaa daal.
Saameyn faa'iido leh oo ku saabsan xaaladda maqaarka, timaha iyo ciddiyaha.
Wax ku ool ah in laga saaro hadhuudhka, hadhuudhka iyo dhibaatooyinka kale ee maqaarka.
Waxaa muddo dheer loo yaqaanaa daaweynta qashinka iyo milixda.
Gargulesku wuxuu ka yareeyaa bararka naas-nuujinta.
Haatan suuqa waa noocyo badan oo canab ah, oo aan hore loo aqoon. Waxay leeyihiin muuqaal cajiib ah iyo dhadhan weyn. Laakiin weli, in badan oo naga mid ah, canabella canabeel ayaa weli ku shaqeeya hooyo, "noocyo" maxali ah. Ma aha oo kaliya koraan on sirqoollada guryaha, isagoo helay caan ah sababo aan qabyo la'aanta iyo iska caabbinta barafooban, berry waa keydka dhabta ah fitamiinnada iyo macdanta, taas oo aad muhiim u ah inaga oo ah nolosha casriga ah.